Health minister who advocated beetroot to treat HIV dies
FORMER South African health minister Manto Tshabalala-Msimang, whose AIDS policies drew international opprobrium, died yesterday after battling liver disease, SAPA news agency reported.
Elders refused entry to Zimbabwe
Former US President Jimmy Carter said he and others have been refused entry to Zimbabwe for a humanitarian mission.
Faction splits from ANC
A BREAKAWAY faction of South Africa’s ruling African National Congress led by a former defence minister was yesterday due to register as a political party, named the South African Democratic Congress, a spokesman said.
Intervention call as Zimbabwe talks fail
Zimbabwe’s opposition leader claims four days of “intense” negotiations have failed to break the deadlock in power-sharing talks and called for intervention by regional and African leaders.
Talks resume to break Zimbabwe deadlock
Zimbabwe MPs heckled each other during the first working session of the new opposition-dominated parliament today as negotiators tried to salvage the African country’s power-sharing agreement.
EU condemns Mugabe's failure to share key ministries
EU nations today condemned moves by Zimbabwe’s president Robert Mugabe to take control of key ministries in defiance of a power-sharing deal with opponents.
Zimbabwe opposition leader threatens to quit government
Zimbabwe’s opposition leader is threatening to pull out of a national unity government if President Robert Mugabe’s party controls all the key ministries.
Zimbabwe crisis continues as MDC declares deadlock
ZIMBABWE’S inflation rate soared to 231 million per cent, but the country’s economic and political crisis showed no sign of ending as the opposition MDC declared a deadlock in power-sharing talks.
Mugabe calls for sanctions to be lifted
Zimbabwe’s president lashed out at Western powers in a speech to the UN General Assembly, accusing them of genocide and calling for the removal of US sanctions.
South African president Mbeki quits
Zuma’s corruption charges dismissed
A SOUTH AFRICAN judge threw out corruption charges against ruling party leader Jacob Zuma yesterday, clearing the way for him to become the country’s next president.
Corruption charges dropped against ANC leader Zuma
The man set to be South Africa’s next president emerged victorious today from a corruption case that dogged him for eight years.
A South African judge ruled today that prosecutors were wrong to charge ANC President Jacob Zuma with corruption, effectively clearing way for the 66-year-old former freedom fighter to become the country’s next president.
Tsvangirai: Zimbabwe power-sharing deal struck
Zimbabwe’s main opposition leader said tonight he had struck a deal to share power with President Robert Mugabe.
Opposition claims Zimbabwe talks remain deadlocked
ZIMBABWE’S main opposition party said yesterday the latest talks on power-sharing with the ruling ZANU-PF that resumed on Friday in South Africa did not reach agreement.
Mbeki: 'Zimbabwe talks reach milestone'
South African President Thabo Mbeki is heading to Zimbabwe, where the government today said coalition talks he is mediating between President Robert Mugabe’s party and the opposition have reached a “milestone”.
Hopes high for power-sharing Zimbabwe deal
South African president Thabo Mbeki, mediating in Zimbabwe’s post-election crisis, will travel to Harare today amid growing optimism a power-sharing deal can be reached between the ruling party and opposition.
Zimbabwe deal could see Tsvangirai in charge with amnesty for Mugabe
ZIMBABWE’S opposition leader Morgan Tsvangirai will run the country under a mooted draft agreement while President Robert Mugabe will become ceremonial president, a South African newspaper reported yesterday.
Mugabe warning over profiting from economic crisis
Zimbabwe’s president Robert Mugabe threatened a state of emergency if businesses profiteer from the country’s economic crisis.
Inflation-hit Zimbabwe knocks off some zeroes
Zimbabwe is knocking 10 zeros off its hyper-inflated currency to make $10bn become one dollar.
Zimbabwe power deal holds out hope for peace
Zimbabwe’s president Robert Mugabe and his bitter enemy Morgan Tsvangirai today agreed to hold talks to resolve the country’s political and economic crisis within two weeks.
Zimbabwe rival parties closer to fully fledged talks
ZIMBABWE’s rival parties have moved closer to a deal to allow fully fledged talks on the country’s crisis, state media said yesterday, after sanctions against Robert Mugabe’s regime were vetoed at the UN.